Ogaden News Agency (ONA) – Shaqaalaha Hawada Itoobiya oo Shaqo Joojin Sameeyay.
Shaqaalaha Hawada Itoobiya oo Shaqo Joojin Sameeyay.
Masuuliyiinta hay’ada hawada maamula ee Bariga Afrika ayaa walaac wayn ka muujiyay nabad galiyada diyaaradaha isticamalaya hawada Itoobiya gaar ahaana aaga garoomada Itoobiya.
Dawlada Kenya iyo Sudaan ayaa sheegay inay ka walaac sanyihiin nabadgaliyada diyaaraha Itoobiya ka baxaya iyo kuwa kusoo dagayaba waxayna sheegeen inay suuragal tahay in diyaardaha warbixin ama hagid khalad ah lasiiyo taasoo sababi karta in diyaaradahu jaho kale aadaan.
Shaqaalaha maamula hawada Itoobiya ayaa Isniintii lasoo dhaafay bilaabay shaqo joojin waxayna kacabanayaan mushaar la’aan iyo daryeel la’aan lafac tirstay, waxayna sheegeen inayna waxshaqo ah qabanaynin inta cabashadooda la meelmarinayo, shaqaalaha hawda Itoobiya ayaa mushaar ahaan uqaata $540.
Taliska Itoobiya oo cabashada shaqaalaha kahad layay ayaa sheegay inayna mudaharaad iyo kharibaad waxba lagu saxaynin waxayna intaas ku dareen inay dib ushaqaalaysiiyeen dad horay shaqada uga fadhiistay iyo dad ay wadamo kale ka keensadeen.
Itoobiya oo ah xarunta Midowga Afrika (AU) ayaa wajahaysa dhaleecayn aduunka dacaladiisa uga imanaysa waxaana lagu tirinayaa wadan xuquuqda aadanaha lagu tunto.